China AT01 Easy Press Vape CBD / THC / Delta 8 ရေနံအရာတစ်ခုသန့်ရှင်းသောအရသာနှင့်ကြီးမားသောအခိုးအငွေ့နှင့်အတူခဲသတ္တုသန့်ရှင်းမှုမရှိသောခဲယဉ်းသတ္တုနှင့်စပ်သောစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | Alphagreen vape
Alphagreenvape ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုရန်သင်သည်အသက် ၂၁ နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။ ဆိုက်ကိုမဝင်မီသင်၏အသက်ကိုစစ်ဆေးပါ။
ကျွန်ုပ်အသက် ၁၈ နှစ်နဲ့အထက်ပါ
ကျွန်တော်အသက် ၁၈ နှစ်အောက်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံများကိုကြည့်ရှုရန် cookies များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ cookie ပေါ်လစီကိုသင်လက်ခံသည်
AT01 Easy Press Vape CBD / THC / Delta 8 ရေနံအရာတစ်ခုစင်ကြယ်သောအရသာနှင့်အခိုးအငွေ့နှင့်အတူခဲသတ္တုအခမဲ့နှင့်ခဲသတ္တုအဘယ်သူမျှမ။
ဖော်ပြချက်အတို： ကျွန်ုပ်တို့သည် AT01 Easy Press Vape CBD / THC / Delta 8 တစ်ခါသုံး vape အရာတစ်ခုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဒါဟာအရသာစင်ကြယ်သောအငွေ့နှင့်အတူ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျွမ်းကျင်သော R&D အဖွဲ့ရှိပြီးကောင်းမွန်သောကြိုတင်ရောင်းချခြင်း၊ ရောင်းချပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကောင်းသောတုံ့ပြန်ချက်များနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားနှင့်အတူဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာအရည်အသွေးဟာဘ ၀ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းရန်မျှော်လင့်။
FOB စျေးနှုန်း: အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၀.၇၈ - ၀.၈၈
Min.Order အရေအတွက် - အပိုင်း ၁၀၀
Supply နိုင်ခြင်း: 300,000 အပိုင်းပိုင်း / လ
ငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက်များ: T / T, PayPal, L / C, D / A, D / P
တရုတ်နိုင်ငံရှိ vape hardware ထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင် GMP အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဆုံးအလုပ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးအမျိုးမျိုးသောအရာများသာမကတစ်ခါသုံးသစ်သားတိပ်ခွေအမျိုးအစားများကိုပါကမ်းလှမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆက်မပြတ်ထုတ်ကုန်အသစ်များတီထွင်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် OEM / ODM ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ သင်သည်၎င်းတို့တွင်အဖြူရောင်တံဆိပ်တပ်ဆင်သူတစ် ဦး ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်ကြယ်ငါးပွင့်ဝယ်သူရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ရေရှည်တွင် CBD vape လုပ်ငန်း၌ကျွန်ုပ်တို့၏တိုးတက်မှုအင်ဂျင်ဖြစ်သည်။ မှလွဲကျည်ဆံ နှင့် vape ကလောင်, ငါတို့လည်းပဲ ပေး vape ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ နှင့် စိတ်ကြိုက် packages များ.
၏ 1. ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း AT01 CBD / THC Vape ကျည်တောင့်
Easy press AT01 သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မူလ cartridge AT01 နှင့်တူညီသော်လည်း၎င်းသည် AT01 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကကွဲပြားခြားနားတဲ့ tip-Easy Press Cap နဲ့ပါ။ AT01 ကျည်တောင့်များသည်လှည့်ကွက်နှင့်အတူရှိပြီးအစွန်အဖျားကိုပိတ်ရန်အတွက်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ လွယ်ကူစွာနှိပ်နိုင်သော AT01 တွင်လွယ်ကူစွာနှိပ်နိုင်သောကြောင့်သင်၏အချိန်နှင့်အလုပ်ကိုသက်သာစေသည်။ ပိုပြီးလွယ်ကူပြီးလွယ်ကူပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်အစွန်အဖျားဟာပွင့်လင်းမြင်သာပြီးမီးခိုးရောင်ဖြစ်တယ်။ သို့သော်အခြားအရောင်များကို MOQ ၃၀၀၀ ဖြင့်လည်းပြုပြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တံဆိပ်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်းဒီဇိုင်းကိုလည်းထောက်ပံ့သည်။
ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ AT01 လွယ်ကူသောစာနယ်ဇင်းသည့်အရာတစ်ခုသည်ယိုစိမ့်မှုနည်းသည်။ ၎င်းသည်လွယ်ကူစွာ နှိပ်၍ ဖွင့ ်၍ မရပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ရေနံများယိုစိမ့်ခြင်းနှင့်ဖြုန်းတီးခြင်းများအတွက်သင်စိတ်မပူပါနှင့်။
2. ကုန်ပစ္စည်း Parameter (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်) AT01 CBD / THC Vape ကျည်တောင့်
CBD / THC vape ကျည်တောင့် / Easy Press AT01
သတ္တု / Pyrex ဖန်ခွက် / ကြွေကွိုင်
: D 10.5mm & L ကို 42.3 / 51.8mm
၄ * ၁.၀ မီလီမီတာ / ၁.၅ မီလီမီတာ / ၂.၀ မီလီမီတာ （စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား）
ကုန်ပစ္စည်း၏အသွင်အပြင်နှင့်လျှောက်လွှာ AT01 CBD / THC Vape ကျည်တောင့်
- သိကောင်းစရာသိကောင်းစရာသိကောင်းစရာကိုနှိပ်ပါ၊ စက်အစားလက်ဖြင့်ဖိပါ။
—Ho Heavy Metal၊ ခဲသတ္တုအမျိုးအစားမရှိပါ။
—CDD / THC အမျိုးမျိုးသောဆီများအတွက်သင့်တော်သည်။
—No Leak Design
- OEM / ODM ၀ န်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့ပါ
4. ထုတ်လုပ်မှုအသေးစိတ် AT01 CBD / THC Vape ကျည်တောင့်
glass စုစုပေါင်းဖန်ခွက်အစွန်အဖျား၊ ပလပ်စတစ်မျှမရှိပါ။ သင့်ကျန်းမာရေးကိုမျက်ခြည်မပြတ်ပါစေနှင့်
heavy လေးလံသောသတ္တု၏အလယ်ဗဟိုတွင်မရှိပါ။ သင်သည်လေးလံသောသတ္တုများ၏အန္တရာယ်ကိုသိလိုပါကအောက်ဖော်ပြပါဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ။
oil ရေနံစုပ်ယူနိုင်မှုနှုန်း၊ ကွဲပြားသောအထူရေနံအတွက်သင့်တော်သည်။
သတင်းများအရမိုးသည်းထန်စွာသတ္တုသည်လူ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအထူးသဖြင့်ပတ် ၀ န်းကျင်အတွင်းရှိလေးလံသောသတ္တုများညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်လူများအားဖျားနာစေပြီးကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်သတ္တုလေးများသည်သက်ရှိနေရာတိုင်းတွင်သာမကပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုသာမကအမျိုးသမီးသူငယ်ချင်းများအသုံးပြုသည့်အလှကုန်များတွင်ပင်သတ္တုသည်များသောအားဖြင့်ရှိသည်။ ၎င်းသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိခိုက်စေမှုအလွန်ဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပြီး၎င်းကိုရှာဖွေရန်မလွယ်ကူပါ။ လေးလံသောဒြပ်စင်အမျိုးအစားများစွာရှိသည်။ သတ္တုအမျိုးအစားအမျိုးမျိုး၏လူ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုထိခိုက်စေသည်။ ထို့နောက်လူကြီးများနှင့်အတူသွားပြီးလေးလံသောသတ္တုများ၏အန္တရာယ်များကိုလေ့လာကြပါစို့
ခဲခဲသတ္တုသည်လေထုညစ်ညမ်းမှုအဆိုးရွားဆုံးသောသတ္တုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်သည်နှင့်၎င်းသည်လူ့ ဦး နှောက်ဆဲလ်များကိုတိုက်ရိုက်ပျက်စီးစေပြီးကင်ဆာစိတ်ကျန်းမာရေးနှေးကွေးစေနိုင်သည်။ ။
မာကျူရီ, မာကျူရီကိုစားသုံးခြင်းသည်အသည်းသို့တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ပြီး ဦး နှောက်၏အာရုံနှင့်အာရုံကြောများကိုပျက်စီးစေသည်။ ရေတွင်မာကျူရီအနည်းငယ်ပါဝင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်မာကျူရီပါသောရေကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအစားထိုးပါကနာတာရှည်အဆိပ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အာဆင်းနစ်, ဒီမိုးသည်းထန်စွာသတ္တုအရေပြားအရောင်ခြယ်ခြင်းနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သော keratinization ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
Aldehydes ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာနှင့် ဦး နှောက်သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အရေးကြီးဆုံးသောအန္တရာယ်မှာသွေးပေါင်ချိန်ဖြစ်သည်။
သယ်လီယမ် မျိုးစုံ neuropathy ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
မန်းဂနိစ် သိုင်းရွိုက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည် hyperthyroidism ရရန်လွယ်ကူသည်။
လူများစွာသည်သတ္တုများစွာ၏အန္တရာယ်များကိုသေချာပေါက်နားလည်ထားကြသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ သတ္တုသည်လူ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အဆိုးရွားဆုံးသောထိခိုက်မှုမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေနိုင်ပြီးအသက်အန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ၌သိသာသောညစ်ညမ်းမှုများ၊ အထူးသဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလေးလံသောသတ္တုများကိုမြေကြီးနှင့်ရေထဲသို့ ၀ င်ရောက်စေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လူတို့သည်ဤညစ်ညမ်းသောရေနှင့်မြေဆီလွှာများနှင့်ထိတွေ့မိပါကနာတာရှည်အဆိပ်သင့်စေပြီး၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိပြproblemsနာအချို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ရောဂါများကအသက်ကိုခြိမ်းခြောက်သည်။
ရှေ့သို့ Universal CBD / THC / Delta 8 510 ကျည်တောင့်အတွက်သင့်တော်သော ၅၁၀ ချည်နှင့်အတူ AIR Button Activation ညှိနိုင်သောညှိနှိုင်းနိုင်သောဗို့အားအုန်းဘက်ထရီ
နောက်တစ်ခု: AT01 Vape CBD / THC / Delta 8 ကျည်တောင့်သည်၊ သန့်ရှင်းသောအရသာနှင့်အခိုးအငွေ့ကြီးသောသတ္တုခဲများမခဲပါ။
cbd vape ကျည်တောင့်
ကြွေ cbd အရာတစ်ခု
ပြန်လည်ဖြည့်သွင်း cbd ရေနံအရာတစ်ခု
လိပ်စာ:၅ လွှာ၊ အမှတ် ၃ အဆောက်အ ဦး၊ Ji An Tai စက်မှုဇုန်၊ Tian Fu လမ်း၊ Bao'an ခရိုင်၊ Shenzhen၊ China
©မူပိုင်ခွင့် - 2010-2021: မူပိုင်ခွင့်များရယူထားပါ။ Featured ထုတ်ကုန်များ, Sitemap, 510 ဘက်ထရီ, ဘက်ထရီ vape ကလောင်, တစ်ခါသုံး vape ကလောင်, အားပြန်သွင်းနိုင်သော vape ဘောပင်, vape ကလောင်အမည်, တစ်ခါသုံး cbd ရေနံ vape, ထုတ်ကုန်အားလုံး